လူတိုင်းမကိုင်နိုင်တဲ့ သိန်းချီတန်တဲ့ဖုန်းကို ဝယ်ကိုင်လိုက်တဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ – Cele Top Stars
လူတိုင်းမကိုင်နိုင်တဲ့ သိန်းချီတန်တဲ့ဖုန်းကို ဝယ်ကိုင်လိုက်တဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ
“မနေ့ကပဲ ထွက်တယ် ဒီနေ့ပဲ အိမ်ရောက်လာတယ်”လို့ဆိုကာ နောက်ဆုံးပေါ် လူတိုင်းမကိုင်နိုင်တဲ့ သိန်းချီတန်တဲ့ဖုန်းကို ဝယ်ကိုင်လိုက်တဲ့ ဧငြိမ်းဖြူရဲ့အကြောင်းလေးကို cele top stars ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်
ပရိသတ်ကြီးရေ မော်ဒယ် မင်းသမီးချော ဧငြိမ်းဖြူ ကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးညပီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။ ဧငြိမ်းဖြူကတော့ အသံဇာတ်လမ်းတွဲ များကို ပြန်လည်သရုပ်ဖော် ရိုက်ကူးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲများနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။
ဧငြိမ်းဖြူကတော့ နိုင်ငံခြားသူလေးလို မျက်နှာ ကျလေးနဲ့ ကျော့ရှင်းတဲ့ အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အမြဲတမ်း အပြင်မှာပါ မင်းသမီးလေးတစ်ပါးလို ကျော့ရှင်းမှုတွေနဲ့အတူ ဖက်ရှင် ကျ လှပသူတစ်ယောက် ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာလည်း အမြဲ Update ဖြစ်ကာ ဝတ်ဆင်ရာ မှာ အထာကျသူ မင်းသမီးတစ်လက်ပါ.။
ဒီနေ့ နိုဝင်ဘာလ (၁၅)ရက်နေ့မှာလည်း ဧငြိမ်းဖြူက Update တိုင်းကို ကိုင်ကာ အထာ ကျသူ တစ်ယောက်လို့ ဆိုစရာ မလိုအောင် အသစ်ထွက်တဲ့ Iphone Series ထဲက 12 ProMaxကို ဝယ်ထားတာ ရောက်ရှိ လာချိန် ကျေနပ်နေတဲ့ စာလေးကို “12 PROMAX လေး မနေ့ကပဲ ထွက်တယ် ဒီနေ့ လက်ထဲ ရောက်လာတယ်.။
ဘယ်လို SERVICE ကကြမ်း BLUE အရောင်ဆို ဘာမှကို မကြိုက် တတ်တော့ GOLD လေးမှာ လိုက်တာ လုံးဝ နောင်တ မရတော့ဘူး အရမ်းအရမ်း လှတဲ့ GOLD ပါ.။ ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ My Day မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။
ဧငြိမ်းဖြူကတော့ အမြဲ ဖက်ရှင်နဲ့အတူ Update တိုင်းကို ကိုင်နေပြီး ကျော့ရှင်းလှပသူ မင်းသမီးချောလေးပါပဲနော်..ပရိသတ်ကြီး.။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်. ။
အစမှ အဆုံးဖတ် ပေးသော Cele top stars ပရိတ်သတ်ကြီးအားကျေး ဇူးတင်ပါတယ် ။အနုပညာရှင်တွေရဲ့ သတင်းတွေကို အစဉ်အပျက် တင်ဆက်ပေးနေသော cele top stars page လေးကို like and share လေးပြုလုပ်ပေးကျပါအုံးနော်…
“မေန႔ကပဲ ထြက္တယ္ ဒီေန႔ပဲ အိမ္ေရာက္လာတယ္”လို႔ဆိုကာ ေနာက္ဆုံးေပၚ လူတိုင္းမကိုင္ႏိုင္တဲ့ သိန္းခ်ီတန္တဲ့ဖုန္းကို ဝယ္ကိုင္လိုက္တဲ့ ဧၿငိမ္းျဖဴရဲ႕အေၾကာင္းေလးကို cele top stars ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္
ပရိသတ္ႀကီးေရ ေမာ္ဒယ္ မင္းသမီးေခ်ာ ဧၿငိမ္းျဖဴကိုေတာ့ အထူးအေထြ မိတ္ဆက္ေပးစရာမလိုေအာင္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးညပီးသားျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္.။ ဧၿငိမ္းျဖဴကေတာ့ အသံဇာတ္လမ္းတြဲ မ်ားကို ျပန္လည္သ႐ုပ္ေဖာ္ ႐ိုက္ကူးတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားနဲ႔ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈေတြကို ရရွိထားသူပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.။
ဧၿငိမ္းျဖဴကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသူေလးလို မ်က္ႏွာက်ေလးနဲ႔ ေက်ာ့ရွင္းတဲ့ အလွကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး အၿမဲတမ္း အျပင္မွာပါ မင္းသမီးေလးတစ္ပါးလို ေက်ာ့ရွင္းမႈေတြနဲ႔အတူ ဖက္ရွင္ က် လွပသူတစ္ေယာက္ ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.။ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းပိုင္းမွာလည္း အၿမဲ Update ျဖစ္ကာ ဝတ္ဆင္ရာ မွာ အထာက်သူ မင္းသမီးတစ္လက္ပါ.။
ဒီေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၅)ရက္ေန႔မွာလည္း ဧၿငိမ္းျဖဴက Update တိုင္းကို ကိုင္ကာ အထာ က်သူ တစ္ေယာက္လို႔ ဆိုစရာ မလိုေအာင္ အသစ္ထြက္တဲ့ Iphone Series ထဲက 12 ProMaxကို ဝယ္ထားတာ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္ ေက်နပ္ေနတဲ့ စာေလးကို “12 PROMAX ေလး မေန႔ကပဲ ထြက္တယ္ ဒီေန႔ လက္ထဲ ေရာက္လာတယ္.။
ဘယ္လို SERVICE ကၾကမ္း BLUE အေရာင္ဆို ဘာမွကို မႀကိဳက္ တတ္ေတာ့ GOLD ေလးမွာ လိုက္တာ လုံးဝ ေနာင္တ မရေတာ့ဘူး အရမ္းအရမ္း လွတဲ့ GOLD ပါ.။ ” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕ My Day မွာ တင္လာခဲ့ပါတယ္.။
ဧၿငိမ္းျဖဴကေတာ့ အၿမဲ ဖက္ရွင္နဲ႔အတူ Update တိုင္းကို ကိုင္ေနၿပီး ေက်ာ့ရွင္းလွပသူ မင္းသမီးေခ်ာေလးပါပဲေနာ္..ပရိသတ္ႀကီး.။ ဖတ္ရႈ႕ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေပ်ာ္႐ႊင္သာယာတဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္. ။
ချစ်မဝတဲ့ ရွှေနှစ်ရွှေရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေး